Maxkamada Bosaso oo maanta Xarig Kuriday Wariye Faysal Maxamad Xasan(SAWIRO) – SBC
Maxkamada Bosaso oo maanta Xarig Kuriday Wariye Faysal Maxamad Xasan(SAWIRO)
Posted by editor on Julaay 2, 2011 Comments
Maxkamad darjada 1aad ee magaalada Bosaso ayaa maanta waxaa lahor keenay wariye Faysal Maxamad Xasan Boston oo mudo afr maalmood ah kuxirnaa saldhiga bartamaha ee magaalada Bosaso .
Maxkamada ayaa waxaa Goob joog ka ahaa in badan oo kamid ah Saxafiyiinta Magalada Bosaso Kahawlgala.
Xeer ilaaliye Bashiir Hobaley oo ahaa xeer ilaaliyihii danbiga ku soo ogay wariye Faysal Bostoon ayaa guda galay soo jeedinta dacawada loo haysto wariyha. isgoona sheegay in Faysal uu qoray qoraal lidi ku ah jiritaanka maamulka Puntland kaasi oo uu ku sheegay in wariyuhu uu qoray warbixin uu kusheegayo in qaar kamid ah ciidamada amaanka Puntland qoorta laga jaray taasina ay tahay ayuu yiri meel kadhac.
Bashiir hoobaley ayaa eedeynta wariye faysal Bostoon u adeegsaday Qodobada 219 -215 oo uu sheegay in uu mutaystay in qodobadaasi lagu xukumo .
Wariye Feysal Maxamad Xasan Boston
Qareenadii udoodayay wariyaha oo ahaa labo qareen kalana ah Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan iyo Maxamed Cabdi Gurey Madoobe ayaa waxa ay sheegeen in qodobada loo adeegsaday faysal baston ay yihiin kuwo aanu uqalmin waxayna xukunkaasi ku tilmaameen mid aan sharciga waa faqsaneyn .
Qareen Maxamed Cabdi Gurey Madoobe
Intaasi kadib ayaa waxaa xukunka ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamada Bosaso Sheekh Aadan Aw-Axmed sheegayna in faysal boston lagu xukumo hal sano oo xariga.
Dhanka kale wariyaayasha Kahwalgala magaalada Bosaso ayaa si aada u cambaareeyay xukunka sharcidarada ah ee lagu riday wariye Faysal Maxamad Xasan Bostoon . .
wariye faysal botoon wuxuu noqonayaa wariyihii sadexaad ee xukun maxkamdi kurido intii uu xilka hayey madaxweyne faroole .
Saxafiyinta Boosaaso oo Taagan Banaanka Maxkamada
Cabdifath lolz says:
Julaay 2, 2011 at 4:58 pm
Aad ayan uga xumahay xariga lagu xukumay wariye faysal boston waxayna sharaf dhac weyn kutahay mamulka hada ka arimiya puntland in la ugarsado suxufiyinta
Julaay 2, 2011 at 7:36 pm
aad baan uga xumahay in weriyahaas la xiro lkn haday jidho sida la sheegayo puntland waxaa uma qalmato ninkaagan abdifatah isku shegay ha aflgaadayn maamulk anaguu noo taliyaa aaminsana marka waxba lagama sheegi karo
mucaad ahmed says:
Julaay 2, 2011 at 8:49 pm
aad ayan uga xumahay wariyaha xariga lagu xukumay faysa baston wxaan filayaaa waxaasi waa laguxad gudbay wariyahaaa gudanaayey waajibkis kasaran bulshad ee maamulkaa puntland haska dhaafo wax yaaalaha uu ku kacaayo markas taa uaha folxumadaa logeysanaayo wari yaashaa dadakaa u adee gaayaa bulshada somaliyed
Julaay 3, 2011 at 11:12 am
waxaan maamulka puntland ka codsanayaa in la baaro habka ay ku shaqayso GALGALA NEWS kuwaas oo qora warar been iyo dulmi uu ku jiro ee lagula kacayo dadka reer puntland iyo beeloheeda iyo madaxdeeda